News - Cilmi-baaris baakad-cunid ah oo la cuno-karo
Cilmi-baarista baakadaha Edible_biodegradable
Cilmi baaris cilmiyaysan oo ku saabsan soosaarka, tayada iyo codsiyada suurtagalka ah ee filimada la cuni karo / la nabaad gudi karo ee soo saarista cuntada waxaa sameeyay kooxo cilmi baaris ah oo badan oo adduunka ah waxaana lagu soo warramey daabacadaha cilmi baarista.5-9. Awoodda ganacsi iyo deegaan ee baaxadda leh ee aagga filimada / ranjiyeynta la cuni karo / la baabiin karo ayaa inta badan la adkeeyay5,10,11 iyo qoraallo badan ayaa ugu horreyntii ka hadlay arrimaha la xiriira aaladaha farsamada, guurista gaaska, iyo saameynta ay leeyihiin arrimo kale oo ku saabsan guryahaas, sida nooca iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin caagleyda, pH, qoyaan iyo heerkulka iwm.6,8,10-15.
Si kastaba ha noqotee, cilmi-baarista ku saabsan filimada la cuni karo / la baabi'in karo wali waxay ku jirtaa bilowgeeda iyo cilmi baarista ku saabsan dalabka warshadaha ee filimada la cuni karo / la duugi karo ayaa helay feejignaan dheeri ah sanadihii la soo dhaafay, si kastaba ha noqotee, caymisku wali wuu xadidan yahay.
Baarayaasha Kooxda Baakadaha Cuntada, Waaxda Cuntada iyo Cilmiga nafaqada, Jaamacadda College Cork, Ireland, waxay soo saareen dhowr filim oo shaqeynaya, oo ku saleysan biopolymer, la cuni karo / la baabi'in karo sanadihii la soo dhaafay.
Xaddidaadda baakadaha la cuni karo
Guud ahaan, filimada la cuni karo waxay leeyihiin codsi xadidan ugu horeyn sababtoo ah sifooyinkooda jir ahaaneed oo liita. Tusaale ahaan, filimada hal-abuurka ku saleysan waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan oo ka hortaga qoyaanka laakiin kuma jiraan xoog farsamo23. Sidaa awgeed, filimada la dahaaray ayaa la sameeyay iyada oo la wadaagayo laba ama in ka badan oo filimo biopolymer ah. Si kastaba ha noqotee, filimada la dahaaray ayaa faa'iido u leh filimada hal-abuurka ah ee biopolymer-ka ah emulsion sababo la xiriira lahaanshaha guryaha caqabadaha oo la xoojiyay. Abuurista dhismayaasha dahaarka leh ayaa awood u leh inay ka gudbaan cilladahaas iyadoo la adeegsanayo injineernimada filimada la cuni karo / la baabiin karo ee leh lakabyo badan oo shaqeynaya.
Filimada la cuno iyo kuwa la isku qurxiyo ee ku saleysan borotiinada biyaha ku milma inta badan iskood ayaa biyaha u milma laakiin waxay leeyihiin waxyaabo aad u fiican oo oksijiin ah, xaydh iyo dhadham Borotiinadu waxay u shaqeeyaan sidii iskudhaf, jaantus qaabdhismeed qaabab iskudhafyo badan leh, oo keenaya filimo iyo daahan astaamo farsamo oo wanaagsan. Dufuurtu, dhanka kale, waxay u dhaqmaan sidii caqabado wanaagsan oo qoyaan, laakiin waxay leeyihiin gaas liidata, xayr iyo barxad dhadhan. Marka la isku daro borotiinka iyo lipids-ka emulsion ama bilayer (xuub ka kooban laba lakab oo kelli), astaamaha wanaagsan ee labadaba waa la isku dari karaa wixii tabana waa la yareyn karaa.
Laga soo bilaabo cilmi baarista ay sameeyeen Kooxda Cuntada ee Baakadaha Cuntada ee UCC, astaamaha guud ee filimada la soo saaray ee la cuni karo / la baabi'in karo ayaa ah sida soo socota:
Dhumucda filimaanta la cuni karo / la baabi'in karo waxay u dhexeeyaan 25μm ilaa 140μm
Filimadu waxay noqon karaan kuwo cad, hufan, iyo tarjumaad ama madmadow iyadoo kuxiran waxyaabaha laga isticmaalay iyo farsamada wax lagu farsameeyo ee la shaqeeyay
Gabowga noocyada filimada gaarka ah ee hoos yimaada xaaladaha deegaanka ee la kontoroolo ayaa hagaajiyay aaladaha farsamada iyo guryaha ka hortagga gaaska
Kaydinta filimada xaalada jawiga (18-23 ° C, 40- 65 boqolkiiba RH) mudo shan sano ah waxbadan iskama badalin sifooyinka dhismaha
Filimada laga sameeyay maaddooyinka kala duwan si fudud ayaa loo wada daaha ka qaadi karaa
Filimada soosaarka ah waa la calaamadeyn karaa, lagu daabici karaa ama kuleylka ayaa laxiran karaa
Kala duwanaanshaha yar ee microstructure-ka filimka (tusaale kala-soocidda wajiga biopolymer) wuxuu saameeyaa guryaha filimka